चितवनका चितुवा दिनानुदिन किन घट्दैन् ? | suryakhabar.com
Home पर्यटन/संस्कृति चितवनका चितुवा दिनानुदिन किन घट्दैन् ?
चितवनका चितुवा दिनानुदिन किन घट्दैन् ?
on: ४ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार १४:५६ In: पर्यटन/संस्कृतिTags: No Comments
चितवन । बिरालो प्रजातिको महत्वपूर्ण जनावर चितुवा संरक्षण हुन नसक्दा यसको संख्या घट्दै गएको अनुमान गरिएको छ । संरक्षणमा लागेकाले बाघ झैं चितुवाको संख्या पनि घट्दै गएर दुर्लभ हुनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
ठूला मानिसलाई आक्रमण कम गरे पनि बालबालिकालाई यसले आक्रमण गर्ने गर्दछ । गाउँघरमा कुखुरा, कुकुर, बाख्रा, भेडालगायतका घरपालुवा जनावरलाई बाघले खायो भनिए पनि अधिकांश चितुवाले खाने गरेको अर्याल बताउछन् ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष सौराहाका डा आशिष गुरुङ यो जनाबरको संख्या घट्दो क्रममा रहेको बताउनुहुन्छ । विभिन्न समयमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने तस्करको साथबाट बरामद हुने चितुवाको छाला, अंगले पनि यसको चोरी शिकार व्यापक हुने गर्दछ भन्ने प्रमाण रहेको उनी बताउछन् ।
समयमा चितुवाको संरक्षण हुन नसकेमा भविष्यमा यसको अवस्था पनि बाघको अवस्थामा पुग्नसक्ने चिन्ता गुरुङको छ । जताततै पाउने हुँदा शिकार गर्न सजिलो हुने भएकाले पनि शिकारीको रोजाइँमा चितुवा परेको हो । ७० देखि ९० दिनमा प्रायः एक पटकमा दुईवटा बच्चा जन्माउने यो प्रजातिका विषयमा विभिन्न भनाइ रहेको गुरुङ बताउछन् ।
उनले भने, “मानिसको भनाइ अनुसार बिरालो प्रजातिको शरीरमा थोप्ला हुने गर्दथ्यो । थोप्ला हट्दै गएर एउटा सिंह बन्यो, थोप्ला पाटा बन्दै गएर अर्को बाघ बन्यो, थोप्ला नै रहेर चितुवा बन्यो ।”
जिल्ला वन कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद पौडेल बाघ संरक्षण गरिए पनि चितुवा संरक्षणको छुट्टै कार्यक्रम भने नरहेको बताउछन् । वन्यजन्तु भएकाले यसको संरक्षण गरिँदै आएको भए पनि यसलाई लक्षित गरी कुनै कार्यक्रम भने नगरिएको बताउछन् ।
४ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार १४:५६